Uluhlu 6.. Funda iTheyibhile yokuPhindaphinda kuka-6
Amaxesha ama-6 etafile
Itheyibhile ye-6 yitafile eya kuthi isixelele iziphumo zokongeza inani elifanayo kali-6. Oku kusixelela ukuba xa siphinda-phinda 6 × 3 = 18 lento iyafana nokudibanisa u-3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18.
Masibone umzekelo: ukuba sineebhasikithi ezi-6 kwaye kuzo nganye kukho ii-apile ezi-2, siya kuba nee-6 × 2 = ii-apile ezili-12, into esiyenzileyo kukudibanisa 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, Oku kuyafana nokuba sisebenzisa itafile ka-6.
Uya kuyisebenzisa le tafile kubomi bakho bemihla ngemihla nanini na ufuna wazi iziphumo ezi-6 zobungakanani. Umzekelo, unokusinceda: ukuba sinamatyala emali ayi-6 kwaye ibhili nganye iyi- $ 5, xa iyonke siza kuba ne-6 × 5 = $ 30.
Iimpawu zetheyibhile e-6 :
• Le tafile isinika iziphumo zalo naliphi na inani eliphindaphindwe ka-6.
• Iyasixelela ukuba ukuba sithatha naliphi na inani kwaye siliphinda-phinda ngo-6, kuyakufana nokuba sidibanise amaxesha ama-6, umzekelo: 6 × 3 = 18 okanye yintoni enye: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18.
• Itheyibhile ye-6 iyakusisebenzela ebomini bethu, phakathi kwezinye izinto, ukuze sikwazi ukwazi ixabiso lezinto ezi-6 ezineempawu ezifanayo okanye amaxabiso. Umzekelo, isiqingatha samashumi amaqanda si-6.
• Ukuba sineengxowa ezi-6 ezinee-apile ezi-2 inye, ngoko ke siya kuba no-6 × 2 = ama-apile ali-12 xa zizonke.
• Ukuba sineebhasikithi ezi-6 ezineebhanana ezi-4 kwinto nganye, zizonke izinto esiza kuba nazo zi-6 × 4 = 24 iibhanana
• Ukuba sineebhasikithi ezi-6 kwaye nganye kuzo kukho izilwanyana ezisi-8 ngaphakathi, ke sine-6 ​​× 8 = izilwanyana ezingama-48 xa zizonke.